Dhinac dhan ayaa ku tooganaya ficil fara badan Walaalaha Bombastic | Androidsis
Dhinac ficil-buuxa ah ayaa la dhacaya 'Walaalaha Bombastic
Sidii ay ahaayeen laba ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan Hollywood-ka aflaanta filimada ee 80s iyo 90-meeyadii, Walaalaha Bombastic waxay la yimaadaan ujeeddo kasta oo aad ku raaxaysatid Bambo leh ficilkeeda ciyaaraha lagu buuxiyay dhinac dhinac u rogaya oo leh darbooyin badan iyo gantaallo.
Ciyaar ina xusuusinaysa in badan oo ka mid ah oo ay sii daayeen Istuudiyaha Halfbrick, in kasta oo ay leedahay taabasho kale sawiro si ay u noqdaan kartoon yar. Laakiin kama fogeyso taabashadaas sidaa darteed ochontero oo nimcadeeda ku dareysa ciyaar ku guuleysata tiro badan markii daqiiqadihii ugu horreeyay ay la socdaan ciyaartan.
1 Wareegtada dhinaca Classic oo leh hub badan iyo bambooyin
2 World PvP Arena si aad ugu raaxaysato Walaalaha Bambaanooyinka
3 Ciyaar qurux badan oo ficil badan
Wareegtada dhinaca Classic oo leh hub badan iyo bambooyin
Dan the Man waa ciyaartii sanad ka hor uu daabacay Halfbrick taasina waxay haysaa qayb ka mid ah xooggaas in Walaalaha Bombastic bixiya; in kastoo dhadhankeena midka koowaad uu leeyahay feejignaan dheeri ah heerarka oo dhan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa cinwaan cusub oo loo yaqaan 'Android' oo ah, maxaad u diidaysaa, waxay noqon doontaa ciyaar aad u fara badan
Ka dib markii marayay macruufka, hadda ay timaado Android for baabi'iyaan shisheeyaha kuwaas oo ku soo duulay dhulkeenna quruxda badan ee la jecel yahay. Kaliya uma hureyno nafteena inaan wajahno ajaanibta jinka ah, laakiin waxaan sidoo kale heli doonaa waqti aan ku horumarino markabkeena adoo saaraya xarumo cusub oo noo ogolaanaya waxyaabo qabow.
Sidoo kale miyaynaan isku khaldami doonin iyadoo la dhahayo ciyaartaani waxay ku saleysan tahay arcade-kii SNK ee aan sameeyay bishii Ogosto sanado badan oo arcad ah iminkana waxaan leenahay oo loo arko difaac munaarad dhinac ah haba yaraatee ma aha wax la quudhsado. Waxaan ka hadlaynaa Birta Slug iyo tan cusub ee loogu talagalay android.
World PvP Arena si aad ugu raaxaysato Walaalaha Bambaanooyinka
Marka laga reebo inaad awood u leedahay inaad abuurto saldhig dhammaystiran oo aad si toos ah u tagto si aad uga takhalusto shisheeyahaas karaahiyada ah, walaalaha Bombastic waxaad ku raaxeysan kartaa aag PvP ah oo muuqaal ah si aad ugu muujiso ciyaartoydan ka socota dhulalka kale qoryaha aad ka samaysan tahay. A multiplayer qayb ka badan mahadsanid iyo inaan si dhib leh ula noolaan karno haddii ay ka saaraan noocyada noocan ah.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee Walaalaha Bombastic ayaa ah midab kaftan ah oo sheeko loo adeegsado taasi waxay dhacdaa markaan horay u socono. Waxaa lagu qanacsan yahay in kaliya aysan dhigin dadaalada lagama maarmaanka u ah ciyaarta, sawirada, qaababkaas iyo kuwa kale, laakiin sidoo kale waxay ku shaqeeyeen sheeko xiiso leh oo ay taariikh ugu dhigayaan jilayaashaas soo muuqan doona mar kasta oo aan ciyaar; Waxay u muuqan kartaa doqon, laakiin badanaa waxay siisaa qoto dheer mawduuca ama ciyaarta laga hadlayo.
Maxaa la dhahaa gameplay ma aha si toos ah, inkasta oo aragtida hubkeenna si otomaatig ah loo saari doono bartilmaameedka. Si kale haddii loo dhigo, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan tooganno xilliyada ku habboon si aan midna u seegin, illaa iyo inta aan ku jirno masaafada mitirka cadowga ee hubkeenu u gaarayo.
Ciyaar qurux badan oo ficil badan
Walaalaha Bombastic ugu dambeyntii waxaa loo dhigaa sida ciyaar ficil ah kaas oo lagu qoslo, lagu furo hub cusub si loo qanciyo rabitaankeena dilka iyo taxanahaas cadawga iyo bay'adaha siinaya ciyaar kasta jawigeeda. Waxaan horeyba u ognahay halka ay ka soo jeeddo dhiirrigelinta sida Birta Slug, in kasta oo ay siinayso taabashadeeda si ay isaga fogeyso oo ay u noqoto ciyaar muhiim u ah ciyaarta oo lagu raaxeysto xagaagan.
Farsamo ahaan waa badwaynta wanaagsan iyo istaagaan jawiyada, naqshada jilayaasha iyo hubka leh saamaynta muuqaalka ah ee ay soo saaraan. Waxaa lagu qanacsan yahay inaan gacanta ku dhaqaajin karno geesinimadeena markay maanta wax waliba umuuqdaan inay otomaatig yihiin.
Walaalaha Bombastic waxay la yimaadaan Android iyagoo leh rabitaan badan oo ah inay bixiyaan dagaal badan oo waxaad ku haysataa bilaash Google Play Store. Waxaan u maleynayaa inaan ka hadlayno ciyaar micropayments leh, marka ereyga "freemium" wuxuu kuguula dhawaaqi doonaa wax uun. Waa waxa jira, markaa aan dhowr ciyaaro qaadanno si aan u aragno inay ku qancinayso iyo in kale, maxaa yeelay haddii kalese waxaan u gudbi karnaa kuwo kale oo badan.
Deegaanada iyo qurxinta
Walaalaha Bombastic: Rasaas!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dhinac ficil-buuxa ah ayaa la dhacaya 'Walaalaha Bombastic
SuperFreezZ waa ilo furan oo furan oo lagu beddelo Greenify oo adiga xiisayn kara